Akpa mgbe World Cup mascot mbụ gosiri na elu n'oge World Cup 1966 na England. Onye ọ bụla World Cup ka ebe nwere ya mascot dabere na hosting mba, 13 n'ime ha nnọọ.
Prototype: Odum, a na-ahụkarị ihe nnọchianya maka United Alaeze
Dị ka ndị mbụ mgbe mascot ịbanye World Cup idaha, World Cup Willie a họọrọ na-anọchite anya ndị na United Kingdom. Ọdụm bụ ihe nnọchianya anụmanụ nke United Alaeze (ọbụna English otu na-utu aha "The atọ Ọdụm"), na ya uwe elu e mere na-egosi ọkọlọtọ nke United Alaeze na-eji okwu ụwa cup na ya. E mere site Reg Hoye.
Prototype: A nkịtị Mexico nwa okoro na a na-ahụkarị Sambrero
The World Cup mascot ejiji bụ ịnọgide na-dị ka Mexico họọrọ na-aga na a nkịtị Mexico nwata, yi Mexico kit na a a na Mexico okpu akpọ Sombrero na MEXICO 70 dere na ya na-anọchi anya World Cup. Aha ya wee si Juan, dị ka otu n'ime ihe ndị kasị nkịtị Spanish aha eji na Mexico. Ọ na-anọchi anya ọcha na ngosi play na a World Cup ebe ọ bụla red kaadị e ji.
NDỤMỌDỤ na enweta
Prototype: Abụọ ahụkarị German ụmụ nwoke yi Germany kit
N'ihi na World Cup 1974, na akwado Germany nwekwara họọrọ na-aga na-ahụkarị mba Fans dị ka Mascots. Abụọ Fans a họọrọ dị ka ọtụtụ a na-achọ German Fans na-anọchite anya ma East Germany na West Germany. Na WM 74 guzo maka Weltmeisterschaft (World Cup), abụọ mascots e mere ịmakụ onye ọ bụla ọzọ iji kwalite kwekọrọ, ịdị n'otu, na ngosi play.
Prototype: An Argentine ikpu okpu, handikachifu, na ụtarị, nke bụ ihe atụ nke Gauchos na Argentine
Dị ka a n'ihu nke mascot ọdịnala iji a mmadụ dị ka mascot, Gauchto e họọrọ dị ka mascot nke Ụwa iko 1978 ẹkenịmde ke Argentine. Gauchito pụtara obere Gaucho, nke na-akọwa a ahụkarị South American bi. Na mgbakwunye na okpu, handikachifu, na ụtarị, nke bụ niile ahụkarị ihe nnọchianya nke Gauchos, o nwekwara wears Argentine kit na "Argentina 78" e dere na ya okpu-anọchi anya World Cup. Atụghị anya ya, Gauchito bụ nke ikpeazụ mmadụ ji dị ka a World Cup mascot.
Prototype: An oroma, a na-ahụkarị mkpụrụ Spain, yi mba otu kit
Dị ka onye nnọchiteanya nke usu mba, Orange e họọrọ dị ka mascot maka Spain ruru ka ịbụ a ahụkarị mkpụrụ Spain. Aha Naranjito si Naranja, nke pụtara oroma Spanish. Naranjito ka na-atụle otu n'ime ihe ndị kasị ama World Cup mascots ụbọchị, na ọbụna o nwere onwe ya katuunu na 1982 na ruo 26 ji nke 20 nkeji a na-kere.
Prototype: A ose jalapeno dị ka ihe e ji mara Mexico nri, na afụ ọnụ na yi a sombrero
Iji na-dị iche iche si Juanito (Mexico 1970), a ose jalapeno a họọrọ dị ka ndị kasị ahụkarị nnọchiteanya mgwa eji na Mexico na-ekpo ọkụ nri. Aha ya na-abịa site picante nke pụtara oseose-ede ede ma sauces na Spanish. The mustaches na sombrero nwekwara-anọchi anya Mexico omenala ebe na uwe elu a họọrọ na-na-acha uhie uhie ruru ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ịbụ ike dị iche iche, na ọ na-anọchite anya ndị Mexico ọkọlọtọ.
Prototype: Ciao bụ a oge gboo Italian ekele
Ciao bụ nke mbụ ma ọ mmadụ ma ọ bụ nri kọrọ World Cup mascot ẹkenam site FIFA. Ma e wezụga n'ihi aha na na agba, na mascot emeghị metụtara mba mgbe niile. Ciao pụtara ma Ndewo na goodbye na Italian, na ruo-egosi dị ka "ITALY" ma ọ bụrụ na-ele anya anya. Na-adịbeghị anya ntuli aka aro Ciao abụghị nnọọ ewu ewu tụnyere ndị ọzọ World Cup Mascots.
Striker, Ụwa iko PUP
Prototype: A nkịta dị ka a nkịtị US Pet anụmanụ
N'ihi na oge mbụ mgbe, anụmanụ e ji mee ka a World Cup mascot na United States. Yi a Red, White, na Blue uwe elu iji na-anọchi anya United States, striker, Ụwa iko PUP, a họọrọ iji gbaa ndị mmadụ ume na-ekiri na ibu maara nke Soccer, nke bụ nnọọ ewu ewu na US. Nkịta ndị kasị ewu ewu na ukwuu ekele Pita anụmanụ na United States, na-ịkpata ha "onye ji mma enyi" epithet.
Prototype: A ọkpa dị ka a French mba nnọchianya, mgbe aha-abịa site a mix nke football na Asterix
Dị ka ihe nnọchianya mba na omenala nnọchianya nke France (ọbụna French National Flag dere a ọkpa), a ọkpa e họọrọ ka ọ bụrụ World Cup mascot na France 1998. Footix aha si a mix nke Football na Asterix, nke bụ a French na-atọ ọchị dike. Ya enyi na enyi ọnụ ọchị, Footix bụ otu n'ime ihe ndị kasị kwesịrị ncheta mascots na World Cup akụkọ ihe mere eme, nke mere na ọ ghọrọ onye celebrity.
Ato, Kaz, na Nik
Country: South Korea & Japan
Prototype: futuristic kọmputa na-eme na e kere eke dị ka òtù nke otu ìgwè ndị "Atmoball" (a fictional football-dị ka egwuregwu)
Ndị kasị dị iche iche na pụrụ iche mascot / s wee n'oge World Cup 2002 ke South Korea na Japan, n'ụdị futuristic kọmputa na-eme na e kere eke. Ato, Kaz na Nik - ma ọ bụ ọnụ na-akpọ Spheriks - ndị aha họọrọ site a votu site football Fans n'ụwa nile. Ọ bụ ezie na ha enweghị mmekọrita usu mba, akụkọ ha kasị pụrụ iche o sina dị ka ha na-ebi ọzọ Planed akpọ Atmoball na ha na-egwu a yiri egwu egwuregwu football. Ha nwekwara a usoro nke 26 ji ke aha ha, ma ha nọ na họọrọ dị ka ala na-ewu ewu nke ikpeazụ 5 World Cup Mascots ke 2006.
Prototype: odum na a na-ekwu okwu bọl, mgbe ndị aha bụ mix nke mgbaru ọsọ ma ọdụm
Ọ bụ ezie na otu anụmanụ e ji mee ka a World Cup mascot tupu, Goleo IV bụ o sina nnọọ ewu ewu na akwụ akpa ebe ke nghoputa nke 2006. Dị ka a 7.5 ụkwụ "ezigbo" plush ọnụ ọgụgụ, Goleo aha na-abịa site nna ya na-agba ume mkpu nke "Go Leo Go "n'oge football ọkụ. Ọ na-esonyere a okwu football aha ya bụ "Pille", onye maara ihe nile e nwere mara banyere football.
Prototype: A agụ owuru, ọtụtụ dị na South Africa, aha ya bụ a mix nke ZA (South Africa) na Kumi (nke pụtara 10 dị iche iche African asụsụ)
Aga azụ The Illustrated ụmụ anụmanụ dị ka World Cup Mascots mgbe Germany n'ezie mascot, Zakumi bụ 5th anụmanụ na World Cup akụkọ ihe mere eme. Dị ka a na-hụrụ anụmanụ na South Africa, Zakumi e kere dị ka agụ owuru nke na-eji obi ụtọ bụ, n'amaghi ama, adventurous, ikeegwuregwu, na-enwe mmasị ghọgbuo ndị mmadụ na-emeghị ihe ọjọọ na mma ụzọ. Aha Zakumi na-abịa site ZA maka South Africa na Kumi pụtara 10 na ọtụtụ African asụsụ. Ya green ntutu e sijiri na-anọchi anya football ubi na ya "Zakumi egwuregwu bụ Fair Play" motto, Zakumi na-anọchi anya na-anọchi anya South African spirit, ọdịdị mbara ala, na omenala.
Prototype: A atọ-abụọ Armadillo a ngwangwa umu dị na Brazil. Aha ya na-abịa site Football na Ọmụmụ
The World Cup mascot maka Brazil 2014 nwere kpamkpam pụrụ iche akụkọ na ebumnobi. The Atọ-ewere Armadillo aha ya bụ "Fuleco" a họọrọ dị a Brazil ala umu nke okụt nso ikpochapu. Yi a na-acha ọcha t-uwe elu, Fuleco e kere ka ntị Brazil si iche iche nakwa dị ka Atọ-ewere Armadillo si vulnerability. Aha Fuleco-abịa dị ka a mix nke Football na Ọmụmụ.
Halloween Party Ideas: Top 10 Egwu Halloween Akụkọ maka Kids
Olee otú Bee Video na Mgbe mmetụta
Olee otú Download Fox Videos
> Resource> Video> World Cup Mascots-agwa gị History of FIFA World Cup